ဒီကနေ့ မိုးသီး … မနက်ဖန် ကျနော်တို့လား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Myanmar in Focus: Behind the Violence (II)
ဒါဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ ဗုဒ္ဓဝါဒ မဟုတ်။ (ဘာသာပြန်) »
ကိုမိုးသီးကို ကျနော်စကားပြောဖူးတယ်၊ ခင်ပါတယ်၊ ဒီနေ့အထိ လူချင်းမဆုံဖူးဘူး။ ကိုမိုးသီး အတွေးအခေါ်တိုင်းလဲ ကျနော် မကြိုက်ဘူး။ သူ့အတွေးအခေါ်ကြောင့် ကျနော်တို့တတွေ ဒုက္ခရောက်ဖူးတယ်။ ဥပမာ သူ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူခဲ့စဉ် ABSDF ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်တခုဖြစ်တဲ့ “တော်လှန်ရေးသည် ငါတို့ကျောင်း၊ ငါတို့တက္ကသိုလ်” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံကို သ ဘောကျမိလို့ အရွယ်ကောင်းစဉ် လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပြုပညာတွေ မသင်ခဲ့ဘဲ၊ လက်နက်ကိုင်နယ်ပယ်နဲ့၊ Activist လှုပ်ရှားတက်ကြွသူဘ၀ထဲမှာ တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်ပြီး ဘ၀တွေမရေမရာဖြစ်သွားကြတာ မနည်းဘူး။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူး ဒေလီမှာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေအဖြစ် ရပ်တည် နေထိုင်စဉ်က ကိုယ့်ထက်ငယ်ပြီး ပညာသင်ဘို့ကောင်းတဲ့ အသက်၂၀ ကျော် လူငယ်တွေကို ပညာသင်ဘို့တိုက်တွန်းတော့ “တော်လှန်ရေးဟာ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်ပဲဗျ” လို့ ထိထိမိမိဆင်ခြေပေးပြီး အတွေးခေါင်သွားသူတွေအမှန်ပဲ ရှိခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့မှာ မှန်ကန်တဲ့သ ဘောတရားတွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ပညာတတ်ကေဒါတွေ မမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
မှတ်မိတဲ့ဆောင်ပုဒ်တခုရှိသေးတယ်။ “ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကို မျက်လုံးအိမ်သဖွယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြ” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံဆောင်ပုဒ်။ ကျနော်တို့အတော်ရွံခဲ့တဲ့ ဆောင်ပုဒ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ ABSDF က ဘယ်တုန်းကမှ မပတ် သက်ခဲ့သူတွေ၊ အိန္ဒိယအခြေစိုက် ABSL အဖွဲ့ကပါ။ အကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေးပဲလုပ်ခဲ့တယ်။ နယ်မြေဒေသကွဲသလို၊ အိုင်ဒီ ယာလည်း ကွာတယ်။
သူပြည်ထဲဝင်သွားပြီး မြောက်ပိုင်းဘက်သွားတယ်လို့နောက်ဆုံးကြားတယ်၊ အဆက်ကလုံးဝပြတ်နေတာ။ နောက်တော့ ဗြုံးကနဲထောက်လှမ်းရေးအသွင်နဲ့ သတင်းထွက်တော့ ကျနော်တို့ လုံးဝလက်မခံဘူး။ ကိုနိုင်အောင်ကို ခါးခါးသီးသီးငြင်း တယ်။ မြောက်ပိုင်းသူလျိုကိစ္စဟာ မှားယွင်းလုပ်ကြံမှုလို့ ပြောပြတယ်။ ကိုနိုင်အောင်ဘက်ကလည်း ရေလှိုင်းစစ်ဆင်ရေး တို့၊ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်တို့ ဘာတို့နဲ့အသေအချာ ရှင်းပြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က လက်မခံဘူး။ နောက်ဆုံး ကိုနိုင်အောင်က “ဒီကိစ္စသမိုင်းကပေးတဲ့အပြစ်ဒါဏ်ကို ကျနော်ခံပ့ါမယ်” လို့ ကတိပေးပြီး အငြင်းအခုန် အဆုံးသပ်သွား တယ်။
လတ်တလောလေးတင် ဆရာကြီးဒဂုံတာရာက “ကျနော်တို့တိုင်းပြည်၌ ဒီမိုကရေစီပန်းနုရောင်ကလည်း သန်းစအချိန် ဖြစ်ပါသည်၊ ထိုသို့သော ဒီမိုကရေစီပန်းနုရောင်ကာလတွင် အချင်းချင်းမေတ္တာဖြင့် တဦးနှင့်တဦး ယုံကြည်ရလောက် သော အနေအထားများဖြင့် ဆက်ဆံကာ မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် အလေးထားလုပ်ဆောင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံပါ သည်။ ယခုကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီနုနယ်သောအချိန်တွင် လှေကိုမလှုပ်အောင် လူးအောင်မလုပ်ဖို့ အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံပါ သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလများ အတွေ့အကြုံအရ ယခုကာလကို စိုးရိမ်စွာစောင့်ကြည့်နေရသော အချိန်ဟု ကျွန်တော် ယူဆ ပါသည်။ ၂၀၁၅ ထိအခြေအနေ တည်ငြိမ်ချောမွေ့အောင် ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြ” လို့ ပြည်သူတွေကို တိုက်တွန်းထားပါ တယ်။
Tags: All Burma Students' Democratic Front, Burma, Irrawaddy, Kachin State, Moethee Zun, Non-governmental organization, Organizations, Thein Sein
This entry was posted on September 5, 2012 at 1:43 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “ဒီကနေ့ မိုးသီး … မနက်ဖန် ကျနော်တို့လား”
Politicians used to choose the popular politics are also not always right. See most of the politicians acting like three wise monkeys on Human Rights issues of Rohingya when it may reduce their popularity. For me I am hated by Myanmar Gov, Kyant Phut, Rakhines, NLDs, Myanmar Muslims (because I supported the Rohingya issue) and some Rohingyas because I advised them to accept the President’s VOA interview and to help save face of U Thein Sein by accepting to be called Bengali. I even dare not write about Malaysia because of backlash although I wrote the feedback in good faith without interfering in their politics. My family want me to stop all FB and blog activities…..